युवतीको न्यायको लागी धनगढीको सडकमा जब ‘जस्टिस फर भागरति’ को नारा घन्कियो ! – Sodhpatra
युवतीको न्यायको लागी धनगढीको सडकमा जब ‘जस्टिस फर भागरति’ को नारा घन्कियो !
प्रकाशित : २४ माघ २०७७, शनिबार १४:३२ February 6, 2021
धनगढीः बुधबार बैतडीमा १७ वर्षियाा किशोरी भागरथी भट्ट मृत अवस्थामा फेला परिन् । घरबाट विद्यालय गएकी भट्ट साँझ घर नफर्केपछि खोजी गर्दै जाँदा बिहीबार साँझ ५ बजेतिर भट्टको शव हत्या गरि फालिएको अवस्थामा लवलेक जंगलमा फेला परेको थियो । उक्त प्रकरणबारे दुई दिनसम्म पनि कुनै तथ्य बहिर नआएपछि स्थानिय स्तरबाट घटनाको गहन अनुसन्धान र दोषिमाथी कारवाहीका लागि आवजहरु उठ्न थालेका छन् । यसैबीच शुक्रबार धनगढीमा पनि जस्टिस फर भागरथी लगाएतका नारासहित नेपाल विद्यार्थी संघले दोषिमाथी कारवाहीका लागि प्रदर्शन गरेको छ ।
निर्ममपुर्वक हत्या गरिएको भट्टको न्यायका लागि आफुहरुले दवावमूलक आन्दोलन गरेको नेविसंघका जिल्ला कमिटी सदस्य हितेश चन्दले बताउनुभयो । नेपाली जनताको ज्युधनको सुरक्षा कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै चन्दले उक्त घटनामा संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
त्यस्तै आन्दोलनमा उत्रिएका नेविसंघका विद्यार्थी नेता नेत्र उपाध्यायले पनि भट्टको न्यायका लागि माग गर्नुभएको छ । उहाँले विगतमा हत्या गरिएकी निर्मला पन्त र सम्झना विकलाई सम्झिदै फेरी पनि यस्तै घटना घट्नु निकै दुखद रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रपति आफै महिला भएको मुलुकमा नारी सुरक्षित नभएको उपाध्यायले बताउनुभयो । त्यस्तै उपाध्यायले यस्ता घटनामा संलग्न दोषिमाथी कारवाही हुन नसक्नु सरकारकै कमजोरी रहेको समेत दावी गर्नुभएको छ ।
बैतडीमा घटेको उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि एसएसपीको नेतृत्वमा छुट्टै प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनकराज पाण्डेको नेतृत्वमा घटनाको अनुसन्धानका लागि छुट्टै प्रहरी टोली परिचालन गरिएको हो । धनगढीबाट तालिम प्राप्त कुकरसहित प्राविधिकको टोली परिचालन गरिएको बैतडीका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायव उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । घटनाको थप अनुसन्धानका लागि कुकुरसहितको टोली परिचालन गरिएको हो ।
प्रहरी निरन्तर अविरल आफ्नो कर्ममा कटिवद्ध भएर लागिरहको छ । राजनितकिदलहरु लगाएत विभिन्न सरोकार वालाहरु भगरतिको न्यायकोलागि निरन्तर आवाज उठाईरहेका छन् र अझै त्यो क्रम जारी छ ।
आज र भोलि बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधी खुवाइँदै (भिडियो)
गरिबका पनि गरिब, असहायका पनि असहाय धन बहादुर टमाटाको जीवन संघर्ष (भिडियो)
अन्तत: प्रहरीले सार्वजनिक गर्‍यो भागरथी हत्याका अभियुक्त ‘कुकर्मी’ दिनेश लाई
सुदूरको मुटु धनगढीमा पहिलो पटक हृदय रोग उपचार सेवा, अन्यत्रै धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य (भिडियो सहित)
ठुलो दुर्घटनाबाट जोगियो धनगढीबाट बाजुराका लागि हिँडेको मालवाहक ट्रक !